ချဲလ်ဆီးကို ဝယ်မယ့် သူဌေးများ ၊ ဒေါ့မွန် စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ချဲလ်ဆီး ရှေ့တန်းလူ ၊ PSG နဲ့ပွဲမှာ ပြန်ပါလာနိုင်တဲ့ ရီးရဲစတား တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ချဲလ်ဆီးကို ဝယ်မယ့် သူဌေးများ ၊ ဒေါ့မွန် စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ချဲလ်ဆီး ရှေ့တန်းလူ ၊ PSG နဲ့ပွဲမှာ ပြန်ပါလာနိုင်တဲ့ ရီးရဲစတား တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
March 3, 2022 - by Editor
ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ပိုင်ရှင် ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် က သူဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ရောင်းထုတ်ဖို့ စီစဉ် လိုက်ရပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့ က အတည်ပြု ပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။
အေဘရာမိုဗစ်ချ် ဟာ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အသင်းကို ပေါင် ၄ ဘီလီယံ နဲ့ ရောင်းထုတ်လိုပြီး ပေါင် ၂.၅ ဘီလီယံ ရှိတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု တခုကို ငြင်းပယ် ထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
လက်ရှိ မှာတော့ ဆွစ်ဇာလန် သူကြွယ် ဝက်စ် ၊ အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တော့ဒ် ဘိုဟီးလ် တို့ဟာ ချဲလ်ဆီး ပိုင်ရှင်သစ်တွေ ဖြစ်လာ နိုင်တယ်လို့ ရေပန်းစား နေကြပါတယ် ။
နာမည်ကျော် UFC ချန်ပီယံဟောင်း ကော်နာ မက်ဂရီဂေါ် ကလည်း သူဟာ ချဲလ်ဆီးကို ဝယ်ဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ ဆိုရှယ် မီဒီယာထက်မှာ ရေးသားခဲ့ ပါတယ် ။
နောက်ဆုံး သတင်းထွက်လာသူ ကတော့ လန်ဒန် မှာ နေထိုင်တဲ့ ဗြိတိန် အကြွယ်ဝဆုံး ဘီလီယံနာ ဆာ ဂျင် ရတ်ကလစ် ဟာလည်း ချဲလ်ဆီး ပိုင်ရှင်သစ် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဂျင် ရတ်ကလစ် ဟာ ဘောလုံးဝါသနာ ပါသူ ဖြစ်ပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို နှစ်သက်ပေမယ့် တမြို့တည်း ဖြစ်တဲ့ ချဲလ်ဆီး ပွဲတွေကိုသာ အများဆုံး ကြည့်ရှု ဖြစ်သူလို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရုရှ ရဲ့ ယူကရိန်း နိုင်ငံကို ကျူးကျော် ဝင်ရောက်မှုဟာ ဘောလုံးသမား နဲ့ နည်းပြတွေကို ရုရှ ကနေ ထွက်ခွာဖို့ တွန်းအား ဖြစ်လာစေခဲ့ ပါတယ် ။
ရုရှ ကလပ် ကရက်စနိုဒေါ ကို ကိုင်တွယ်ဖို့ မကြာခင်ကမှ ရောက်လာတဲ့ နောဝှစ်ချ် နည်းပြဟောင်း ဒန်နီရယ် ဖာကီ ဟာ အသင်းသစ် ကို တပွဲမှ မကိုင်ရသေးခင်မှာပင် ပြန်လည် နှုတ်ထွက် သွားခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဇင်းနစ် အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ၂၃ နှစ် အရွယ် ယူကရိန်း ကစားသမားဟောင်း ရာကီစကီး ဟာလည်း ရုရှ ကလပ် ဇင်းနစ် နဲ့ စာချုပ် ဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ရုရှ လက်ရွေးစင် အသင်းခေါင်းဆောင် ယူဘာ ကတော့ စစ်ပွဲဟာ သူ့ကို ခြောက်ခြားစေခဲ့တယ်လို့ ရေးသားခဲ့ ပေမယ့် မိခင် နိုင်ငံ အပေါ် ရှုံ့ချမှု မပြုခဲ့သလို ရုရှားသား တယောက် ဖြစ်ရတဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်း ရေးသားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် အင်္ဂလန် ကနေ ရုရှ ကျူးကျော်စစ်ကို ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့ ယူကရိန်း ကစားသမားတွေ ( ယာမိုလင်ကို ၊ ဇင်ချန်ကို တို့ကို ရည်ရွယ်ပုံရသည် ) ကိုလည်း အင်္ဂလန် ဇိမ်ခံအိမ်ထဲက အရူးတွေ လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် အဲဗာတန် အသင်း ကတော့ သူတို့ နဲ့ လက်တွဲ လုပ်ဆောင် နေတဲ့ ရုရှ အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်း ၃ ခု ကို ဆိုင်းငံ့ ထားလိုက်ပြီလို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် မှာ ရင်းနှီးမြှပ် နှံထားတဲ့ ရုရှ ဘီလီယံနာ အူစမန်နော့ဗ် ကတော့ စစ်ပွဲကြောင့် ဆန်ရှင် ချမှတ် ခံရသူတွေ ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဂွန်ဇာလို ဟီဂွာအင် ကတော့ မေဂျာလိဂ် ဟာ လီယွန်နယ် မက်ဆီ လာရောက် ကစားမှာကို ရင်ခုန်စွာ စောင့်မျှော် နေတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို ခဲ့ပြီး မက်ဆီ အနေနဲ အမေရိက မှာ ပျော်ရွှင် မှာပါလို့ နောက်တကြိမ် ပြောဆို တိုက်တွန်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရိန်းဂျားစ် နဲ့ နောဝှစ်ချ် စီးတီး တို့ဟာ ရှော်ကေး အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ သြစတြီးယား ဂိုးသမား ဖရေဆယ် ကို နွေရာသီမှာ အလွတ် နဲ့ ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ အပြိုင် ချဉ်းကပ် နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူ သီယာဂို အယ်ကန်ထရာ ရဲ့ ဒဏ်ရာဟာ ပြင်းထန်မှု မရှိ ပေမယ့် အသင်းရဲ့ လာမယ့် ပွဲစဉ် ၂ ပွဲ ( ယမန်နေ့ ညက FA Cup အပါအဝင် ) လောက်ကိုတော့ လွဲချော်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ နည်းပြကြီး ကလော့ က ထုတ်ဖော်ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အမေရိက နဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဒေသ ကလပ်တွေကို သွားရောက် ကစားနိုင်တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ် နေပေမယ့် လာဇီယို တိုက်စစ်မှူးကြီး အင်မိုဘီလီ ဟာ လာဇီယို မှာပဲ အနားယူတဲ့ အထိ ကစားသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အေးဂျင့်က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လာဇီယို နည်းပြကြီး မော်ရီဇီယို ဆာရီ ဟာ နွေရာသီမှာ စပါး ကနေ အတ္တလန်တာ ကို ပြန်လာ နိုင်ဖွယ် ရှိနေတဲ့ ဂိုးသမား ဂိုလီနီ ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် စီစဉ် နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် နောက်ခံလူ ဒေးဗစ် အလာဘာ ဟာ ဒီကနေ့ မှာ ပုံမှန် လေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ် နေနိုင်ပြီး နောက်တပတ် မှာ PSG နဲ့ ကစားရမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက် ဒုတိယ အကျော့ မှာ ပါဝင် ကစားနိုင်ဖို့ အလားအလာ ရှိနေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် ကွင်းလယ်လူ အစ္စကို ဟာ နွေရာသီမှာ ဆီဗီးလား ကို ပြောင်းရွှေ့ဖွယ် ရှိနေတယ်လို့လည်း သတင်းထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ နည်းပြ ဇာဗီ ဟာနန်ဒက်စ် ဟာ လာမယ့် ရာသီမှာ ကွင်းလယ် ကစားသမား ၆ ယောက် ထားရှိဖို့ စဉ်းစား ထားပြီး လိုအပ်တဲ့ သူတွေကို နွေရာသီမှာ ကြိုးစား ကမ်းလှမ်း သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
နောက်ခံလူ အတွက်ကိုတော့ ချဲလ်ဆီး ခံစစ်မှူးတွေ ဖြစ်တဲ့ ခရစ်ရှန်ဆန် နဲ့ အက်ဇ်ပီလီ ကွီတာ တို့ကို မျှော်မှန်း ထားပြီး ခံစစ်အတွက် ငွေပုံအောဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဒေါ့မွန် အသင်းကတော့ ချဲလ်ဆိး ရဲ့ ဂျာမန် တိုက်စစ်မှူး တီမို ဗာနာ ကို နွေရာသီမှာ ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ချဲလ်ဆီး တာဝန် ရှိသူတွေနဲ့ စကားပြောဆိုမှု ပြုလုပ် နေပြီလို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Article ပိုချက်တီနို ၊ တန်ဟတ် တို့ကို မရခဲ့ပါက ယူနိုက်တက်တို့ အစားထိုးခေါ်ယူသင့်တဲ့ နည်းပြကို ဖာဂူဆန် အကြံပြုပြောဆို
Next Article ချဲဆီးကို ရောင်းချလို့ ရတဲ့ ငွေတွေ အားလုံးကို ယူကရိန်း စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ပြန်လည် လှူဒါန်းသွားမယ့် အဗရာမိုဗစ်ချ်